१२:४९, ९ मे २०१३ जस्तै गरी पुनरावलोकन
१९:१४, ९ मार्च २०१३ जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने)
सा (Bot: Migrating 96 interwiki links, now provided by Wikidata on d:q12802 (translate me))
१२:४९, ९ मे २०१३ जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने) (रद्द गर्ने)
'''नाभिकीय अस्त्र''' वा '''परमाणु बम''' एउटा विस्फोटक युक्ति हो जसको विध्वंशक शक्तिको आधार [[नाभिकीय प्रतिक्रिया]] हुन्छ। यो [[नाभिकीय संलयन]] (nuclear fusion) वा [[नाभिकीय विखण्डन]] (nuclear fission) वा यी दुइटै प्रकारको नाभिकीय प्रतिक्रियाहरुकाप्रतिक्रियाहरूका सम्मिलनदेखि बनाउन सकिन्छ। दुइटै नैं प्रकारका प्रतिक्रियाहरुकाप्रतिक्रियाहरूका परिणामस्वरूप केही सामग्रीदेखि भारी मात्रामा [[उर्जा]] उत्पन्न हुन्छ। आजको एउटा हजार किलोदेखि थोरै ठूलो नाभिकीय हथियार यति उर्जा उत्पन्न गर्न सक्छ जति धेरै अरब किलोका परम्परागत विस्फोटकहरुबाटविस्फोटकहरूबाट उत्पन्न हुन सक्छ। नाभिकीय हथियार महाविनाशकारी हथियार (weapons of mass destruction) भनिन्छन्।
[[दोस्रो विश्वयुद्ध]]मा सबैभन्दा अधिक शक्तिशाली विस्फोटक, जो प्रयुक्त भएको थियो, त्यसको नाम 'ब्लकबस्टर' (blockbuster) थियो। यसको निर्माणमा तबसम्म ज्ञात प्रबलतम विस्फोटक ट्राईनाइट्रीटोलीन (TNT)को 11 टन प्रयुक्त भएको थियो। यस विस्फोटकदेखि 2000 गुना अधिक शक्तिशाली प्रथम परमाणु बम थियो जसको विस्फोट टी. एन. टी.का 22,000 टनका विस्फोटका बराबर थियो। अब त प्रथम परमाणु बम भन्दा अधिक शाक्तिशाली परमाणु बम बनेका छन्।
परमाणु बममा विस्फुटित हुनेवाला पदार्थ [[यूरेनियम]] वा [[प्लुटोनियम]] हुन्छ। यूरेनियम वा प्लुटोनियमका परमाणु विखंडन (Fission) देखि नैं शाक्ति प्राप्त हुन्छ। यसका लागि परमाणुका केन्द्रक (nucleus)मा न्यूट्रन (neutron)द्वारा प्रहार गरिन्छ। यस प्रह्योरदेखि नैं धेरै ठूलो मात्रामा ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। यस प्रक्रमलाई भौतिक विज्ञानी नाभिकीय विखंडन (nuclear fission) भन्दछन्। परमाणुका नाभिकका अभ्यंतरमा जो न्यूट्रान हुन्छन् उनैदेखि न्यूट्रान मुक्त हुन्छन्। यी न्यूट्रन अन्य परमाणुहरुमापरमाणुहरूमा प्रह्योर गर्दछन् र उनीसित फेरि विखंडन हुन्छ। यी फेरि अन्य परमाणुहरुकोपरमाणुहरूको विखंडन गर्दछन्। यस प्रकार शृंखला क्रियाहरुक्रियाहरू आरम्भ हुन्छन्। परमाणु बमको अनियन्त्रित शृंखला क्रियाहरुकाक्रियाहरूका फलस्वरूप भीषण प्रचंडताका साथ परमाणुको विस्फोट हुन्छ।
यूरेनियमका धेरै [[समस्थानिक]] ज्ञात छन्। सामान्य यूरेनियममा 99.3 प्रतिशत यू-238 (U-238) र 0.7 प्रतिशत यू-235 (U-235) रहन्छन्। यू-238को विखंडन उतनी सरलतादेखि हुँदैन जति सरलतादेखि यू-235को विखंडन हुन्छ। यू-235मा यू-238को अपेक्षा तीन न्यूट्रान कम रहन्छन्। न्यूट्रनको यस कमीका कारण नैं यू-235को विखंडन सरलतादेखि हुन्छ।
यदि यू-235को [[क्रान्तिक द्रव्यमान|क्रान्तिक संहति]] 20 पौण्ड छ त दस दस पौण्ड दुई जग्गा लेनाले शृंखला क्रिया चालू हुनेछैन। 20 पौण्डलाई एउटा साथ लेनाले नैं शृंखलाक्रिया चालू हुनेछ। शृंखलाक्रियामा न्यूट्रनको संख्या ठूलो शीघ्रतासित बढ़्दछ।
परमाणु बममा विखंडनदेखि यूरेनियम र त्यसलाई निकटवर्ती अन्य पदार्थहरुकोपदार्थहरूको ताप ठूलो शीघ्रतासित माथि उठ्दछ। धात्विक यूरेनियम ठूलो ऊँची दाब र तापमा तापदीप्त ग्यासमा परिणत हुन जान्छ। विस्फोटक पिण्डको ताप 10,00,00,000° से.सम्म उठ जान्छ। इतने ऊँचे तापमा यूरेनियमको थापी (tamper) हट जान्छ। तब सारा पिण्ड ठूलो प्रचंडतादेखि विस्फुटित हुन्छ। परमाणु बमका विस्फुटित भएमा आधात तरंगहरुतरंगहरू (Shock waves) उत्पन्न हुन्छन् जो ध्वनिको गतिदेखि पनि अधिक गतिदेखि चारहरुतर्फचारहरूतर्फ फैल्दछ। जब परमाणु बमलाई पृथ्वीतलका माथि विस्फुटित गरिन्छ त तरंगहरुतरंगहरू पृथ्वीतलदेखि टकराएर माथि उठ्दछन् र नया आघात उत्पन्न गर्दछ जो माथि र तल तीव्रतादेखि फैल्दछ। बम स्फोट (Bomb blast)को केन्द्र तत्काल तप्त भएर निर्वात उत्पन्न गर्दछ। निर्वात भरनका लागि आसनजिककोआसनजीकको ठण्डी हवाहरुहवाहरू दौड़्दछ। यस प्रकार परमाणु बमदेखि घरहरुमाघरहरूमा आघात पड़नाले ती टु्ट्छन्।
विस्फोटी यूरेनियम अन्य तत्वहरुमातत्वहरूमा बदलिन्छ, त्यो भन्दा रेडियो ऐक्टिवेधी किरणहरुकिरणहरू निकलेर जीवित कोशिकाहरुलाईकोशिकाहरूलाई आक्रान्त गर्न तिनलाई नष्ट गर्न दिन्छन्। बमको विनाशीकारी कार्य (1) आघात तरंगहरुतरंगहरू, (2) वेधी किरणहरुकिरणहरू तथा (3) अत्यधिक ऊष्मा उत्पादनका कारण हुन्छ।
हाइड्रोजन बम परमाणुबमको एउटा कुन ्म हो। हाइड्रोजन बम वा एच-बम (H-Bomb) अधिक शक्तिशाली परमाणु बम हुन्छ। यसमा हाइड्रोजनका समस्थानिक ड्यू टीरियम (deuterium) र ट्राइटिरियमको आवश्यकता पर्छ। परमाणुहरुकापरमाणुहरूका संलयन गर्न (fuse)देखि बमको विस्फोट हुन्छ। यस संलयनका लागि ठूला ऊँचे, ताप, लगभग 500,00,000°से कोसेको आवश्यकता पर्छ। यो ताप सूर्यका ऊष्णतम भागका तापसित धेरै अग्लो हो। परमाणु बम द्वारा नैं यति अग्लो ताप प्राप्त गर्न सकिन्छ।
जब परमाणु बम आवश्यक ताप उत्पन्न गर्दछ तभी हाइड्रोजन परमाणु संलयित (fuse) हुन्छन्। यस संलयन (fusion)देखि ऊष्मा र शक्तिशाली किरणहरुकिरणहरू उत्पन्न हुन्छन् जो हाइड्रोजनलाई हीलियममा बदल दिन्छन्। 1922 ई.मा पहिला पहल ठेगाना लागेको थियो कि हाइड्रोजन परमाणुका विस्फोटसित धेरै अधिक ऊर्जा उत्पन्न हुन सक्छ।
1932मा [[ड्यूटीरियम]] नामक भारी हाइड्रोजनको र 1934 ई.मा [[ट्राइटिरियम]] (ट्रिशियम) नामक भारी हाइड्रोजनको आविष्कार भयो। 1950 ई.मा [[संयुक्त राज्य अमरीका]]का राष्ट्रपति ट्रु मैनले हाइड्रोजन बम तैयार गर्ने आदेश दिए। यसका लागि 1951 ई.मा साउथ कैरोलिनामा एउटा ठूला कारखाने स्थापना भएको हो। 1953 ई.मा राष्ट्रपति आइजेनहाबरले घोषणाको थियो कि TNTका लाखौं टनका बराबर हाइड्रोजन बम तैयार भएको हो। 1954 ई.मा [[सोवियत संघ]]ले हाइड्रोजन बमको परीक्षण गरे। [[जनबादी गणतन्त्र चीन|चीन]] र [[फ्रान्स|फ्रांस]]ले पनि हाइड्रोजन बमका विस्फोट गरे छन्।
*[[नाभिकीय भट्टी]] (Nuclear reactor)
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/338087" बाट अनुप्रेषित